Beach Jimbaran any Bali. Indonezia " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Beach Jimbaran any Bali. Indonezia
Beach Jimbaran any Bali. Indonezia
Jimbaran Beach hariva
Jimbaran Resort dia trano iray amin'ireo morontsiraka Bali tsara indrindra. Ny fasika maivana sy ny rano milamina ao amin'ny helodrano no mahatonga an'ity torapasika ity ho filomanosana ho an'ny lehibe sy ny ankizy. Amin'ny harivariva, misy ankizy eo an-toerana maro ao amin'ny helo-drano tia mikorisa eto. Manondro ny fiarovana ny rano eto izany. Ny faritra mangina indrindra amin'ny morontsiraka dia any atsimo. Fa amin'ny ankapobeny, ny morontsiraka iray manontolo dia tena mahafinaritra. Koa satria tsy dia betsaka ny mpiala sasatra eto, dia vitsy ihany koa ireo mpivarotra amoron-dranomasina any Jimbaran.
Ny morontsirak'i Jimbaran Beach dia mizara telo amin'ny fomba mahazatra:
Pantai Muaya - atsimo.
Kedonganan - afovoany.
Pantai Kela - avaratra.
Tsy misy fetra mazava eo amin'ireo faritra ireo. Ny ankamaroan'ny mpanao fialantsasatra dia tia ny faritra atsimo. Ahitana ireo hotely lafo indrindra manara-maso ny faritany sy manadio azy ara-potoana. Ny avaratry ny Beach Jimbaran dia manomboka amin'ny seranam-piaramanidina Ngurah Rai. Ity faritra ity dia be vato kokoa, misy sambo maro sy tsenan-trondro eo akaiky eo. Tsy ny mpandeha rehetra no mankafy an'io.
Tsenan'ny trondro any Jimbaran. Bali
Tsenan'ny trondro Jimbaran
An'ny be indrindra ny morontsiraka. Maitso ny fasika eto. Mivelatra mandritra ny 4 km ny morontsiraka. Ny sakan'ny moron-dranomasina dia 30 ka hatramin'ny 50 m.
Amin'ny hariva, ny kafe any amoron-dranomasina dia mamindra ny latabany eo ambonin'ny fasika. Misaotra an'izany ireo mpiala sasatra fa afaka misakafo amin'ny lovia eo an-toerana rehefa mijery ny filentehan'ny masoandro.
Jimbaran Beach dia any avaratra andrefan'ny Bukit Peninsula any atsimon'i Bali.
Address: Beach Jimbaran, Jl. Bukit Permai 80361, Jimbaran, Bali, Indonezia
mandrindra: -8.780862, 115.163804
Morontsiraka Jimbaran amin'ny sari-tanin'i Bali
Morontsiraka Jimbaran amin'ny sari-tany zanabolana Bali
Sary tao amin'ny Beach Jimbaran
Ny harivan'ny andro any Jimbaran, dia esorina amin'ny fasika ny latabatra